Exodus 25 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Ɔsom ntamadan no ho ntoboa (1-9)
Adaka no (10-22)
Ɔpon no (23-30)
Kaneadua no (31-40)
25 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: 2 “Ka kyerɛ Israelfo no sɛ wonyi ntoboa mma me. Obiara a ne koma bɛka no no, munnye ntoboa mfi ne nkyɛn mma me.+ 3 Ntoboa a mubegye afi wɔn nkyɛn ni: sika kɔkɔɔ,+ dwetɛ,+ kɔbere,+ 4 hama bruu, hama afasebiri, hama kɔkɔɔ, hama papa a wɔde yɛ nwera, apɔnkye nwi, 5 adwennini nhoma a wɔahyɛ no kɔkɔɔ, sukraman* nhoma, ɔkanto dua,+ 6 ngo a wɔde begu nkanea mu,+ balsam ngo a wɔde bɛyɛ ɔsrango+ ne aduhuam,+ 7 ne abohene tuntum ne abo foforo a wɔde bɛbobɔ efɔd*+ ne nkatabo+ mu. 8 Ma wɔnyɛ tenabea kronkron mma me, na mɛtena wɔn mfinimfini.+ 9 Ɔsom ntamadan no ne nneɛma a ɛwom nyinaa, monyɛ no sɛnea merekyerɛ wo yi pɛpɛɛpɛ.+ 10 “Ma wɔmfa ɔkanto dua nyɛ adaka. Ma ne tenten nyɛ basafa* abien ne fã, ne tɛtrɛtɛ basafa baako ne fã, na efi soro besi fam nyɛ basafa baako ne fã.+ 11 Afei fa sika kɔkɔɔ amapa fa emu ne ɛho nyinaa,+ na fa sika kɔkɔɔ no bi toto ano hyia.+ 12 Fa sika kɔkɔɔ yɛ nkawa anan bobɔ baabi wɔ ne nan no biara soro; nkawa abien wɔ ha a, na abien nso wɔ ha. 13 Afei fa ɔkanto dua sen nnua nteaanteaa na fa sika kɔkɔɔ fa ho nyinaa.+ 14 Wode nnua no bɛhyehyɛ nkawa no mu wɔ Adaka no nkyɛn na wɔde asoa Adaka no. 15 Ma nnua no nhyɛ nkawa no mu wɔ Adaka no ho; ɛnsɛ sɛ woyiyi fi mu.+ 16 Adanse Abopon a mede bɛma wo no, Adaka no mu na wode begu.+ 17 “Fa sika kɔkɔɔ amapa yɛ ne mmuaso. Ma ne tenten nyɛ basafa abien ne fã, na ne tɛtrɛtɛ nyɛ basafa baako ne fã.+ 18 Afei fa hamma* boro sika kɔkɔɔ yɛ kerubim abien, na fa sisi mmuaso no afã abien no nyinaa.+ 19 Fa kerubim abien no sisi mmuaso no so, baako wɔ ano ha a, na baako nso wɔ ano ha. 20 Ma kerubim no ntrɛw wɔn ntaban abien no mu nkɔ soro na ɛnkata adaka no mmuaso so.+ Ma kerubim no nni nhwɛanim na wɔn anim nkyerɛ mmuaso no. 21 Afei Adanse Abopon a mede bɛma wo no, wode begu Adaka no mu, na wode mmuaso no+ akata Adaka no so. 22 Meyi me ho adi akyerɛ wo wɔ hɔ, na kerubim abien a wɔwɔ Adanse Adaka no mmuaso so no, me ne wo bɛkasa wɔ wɔn ntam.+ Na ahyɛde a mede bɛma Israel no, ɛhɔ na mɛkyerɛ wo ne nyinaa. 23 “Afei fa ɔkanto dua yɛ ɔpon;+ ma ne tenten nyɛ basafa abien, ne tɛtrɛtɛ basafa baako, na efi soro besi fam nyɛ basafa baako ne fã.+ 24 Fa sika kɔkɔɔ amapa fa ho nyinaa, na fa sika kɔkɔɔ no bi toto ano hyia. 25 Yɛ mfomfamho a ne tɛtrɛtɛ bɛyɛ sɛ nsayam* twa ho hyia, na fa sika kɔkɔɔ twa mfomfamho no ho hyia. 26 Fa sika kɔkɔɔ yɛ nkawa anan, na fa nkawa no bobɔ ntwea anan no ho, baabi a ne nan anan no sisi no. 27 Ma nkawa no mmɛn mfomfamho a wɔde atwa ɔpon no ho ahyia no. Nkawa no mu na wɔde nnua nteaanteaa no bɛhyehyɛ de asoa ɔpon no. 28 Nnua nteaanteaa no, fa ɔkanto dua sen, na fa sika kɔkɔɔ fa ho nyinaa, na wɔmfa nsoa ɔpon no. 29 “Afei yɛ nyowa, nkuruwa nketewa ne akɛse, ne nkankyee a wɔde behwie afɔrebɔ nsã fa sisi so. Fa sika kɔkɔɔ amapa yɛ ne nyinaa.+ 30 Paanoo a wɔde kyerɛ no, da biara wode besi ɔpon no so wɔ m’anim.+ 31 “Fa hamma boro sika kɔkɔɔ amapa yɛ kaneadua.+ Sɛnea wobɛyɛ no ni: Ma ennya nea ebegyina so, ɛnan, nkorabata, nkuruwa, funuma, ne nhwiren. Yɛ ne nyinaa bom baako.+ 32 Ma kaneadua no nnya nkorabata asia, nkorabata abiɛsa wɔ ɔfã baako na abiɛsa nso wɔ ɔfã a aka no. 33 Ma ɔfã baako nkorabata biara nnya nkuruwa abiɛsa a ɛte sɛ aborɔfo nkate nhwiren, funuma, ne nhwiren; wufi funuma so a, na wokɔ nhwiren so. Ma ɔfã a aka no nso nkorabata biara nnya nkuruwa abiɛsa a ɛte sɛ aborɔfo nkate nhwiren, funuma, ne nhwiren; wufi funuma so a, na wokɔ nhwiren so. Saa na yɛ nkorabata asia a ɛwowɔ kaneadua no nan ho nyinaa. 34 Yɛ nkuruwa anan a ɛte sɛ aborɔfo nkate nhwiren wɔ kaneadua no nan ho. Na yɛ funuma ne nhwiren nso wɔ ho; wufi funuma so a, na wokɔ nhwiren so. 35 Faako a nkorabata abien a edi kan no pue fi kaneadua no ho no, yɛ funuma wɔ ase; faako a nkorabata abien a edi hɔ no pue no, yɛ funuma wɔ ase; faako a nkorabata abien a etwa to no pue no nso, yɛ funuma wɔ ase. Enti baabi a nkorabata asia no paapae wɔ kaneadua no ho biara, yɛ bi wɔ ase. 36 Funuma ne nkorabata ne kaneadua mu no nyinaa, fa hamma boro sika kɔkɔɔ amapa+ na yɛ ne nyinaa bom baako. 37 Yɛ nkanea ason sisi so, na sɛ wɔsɔ a, ahyerɛn wɔ kaneadua no anim.+ 38 Fa sika kɔkɔɔ amapa yɛ ɛho nneɛma a wɔde fa ogya ne nkankyee a wɔde ogya gu mu no.+ 39 Sika kɔkɔɔ amapa dwetikɛse* baako na wode bɛyɛ kaneadua no ne saa nneɛma yi nyinaa. 40 Hwɛ sɛ wobɛyɛ no te sɛ ne nhwɛso a mede kyerɛɛ wo wɔ bepɔw no so no.+